Waa maxay macnaha buundada SCHUFA? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks SCHUFA Dhibcaha
1 Waa maxay natiijada SCHUFA?
2 Hadafka goolasha
3 Core aasaasiga ah
4 dhibcaha warshadaha
5 Xakamaynta xogta iyo naqshadaynta natiijada
Waa maxay natiijada SCHUFA?
Dhibcaha SCHUFA waxaa badanaa la fahamsan yahay macnaha hoose ee hoose. Tani waxaa loogu talagalay in lagu saadaaliyo suurtagalnimada shaqsi gaar ah oo fulinaya deynta ama kharashka kale ee aan la bixin.
score Tan waxaa loo abuuray SCHUFA Holding AG, hay'adda ugu weyn credit Germany ee la xaruntiisu tahay magaalada Wiesbaden. Xogta for xisaabinta score this helo hay'adaha credit SCHUFA ku Telekomunikationsanbietern iyo shirkadaha kale, taas oo iyana ku tiirsan yihiin qiyamka xisaabiyaa of SCHUFA.
Xaqiiqdii, qof gaar ah ma aha oo kaliya Basiscore laakiin sidoo kale dhibco warshadeed oo badan.
Fikirka dhibcaha waa in la saadaaliyo mustaqbalka sida saxda ah ee suurtogalka ah iyadoo la adeegsanayo xogta hore.
Tani waxaa loogu talagalay in lagu siiyo labada shirkadood ee amniga waxayna ka caawiyaan kuwa deynta qaada guud ahaan.
Dhinaca kale, khasaarooyinka bixinta waa in lagu hayaa sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah, dhanka kale, deymaha xad-dhaafka ah ee lagu abuuri karo "idaha madow" ayaa laga hortagayaa.
Core aasaasiga ah
Basiscscore waa qiimo ah 0-100 taas oo muujinaysa waa in sida ay u badan tahay waa in qofka waajib ku ah in ay u hoggaansamaan dhaqaale, halkaas oo qiimaha sare waa ka sii wanaagsan. Qiimaha celceliska ee Germany wuxuu ahaa 2016 at 97,8%.
Basisscore waxaa la cusbooneysiiyaa bil kasta 3.
Laybareeriyada waxaa loogu talagalay inay metelaan creditworthiness ee qof ka mid ah la xiriirta aagga ganacsiga.
Waqtigan xaadirka ah 7 wuxuu leeyahay dhibco kala duwan qof kasta:
[liiska] [*] Schufa dhibcaha loogu talagalay bangiyada
[*] Schufa dhibcaha ganacsiga deynta guryaha
[*] Schufa dhibcaha ganacsiga
[*] Schufa dhibcaha amarka boostada & eCommerce
[*] Dhibcaha Schufa ee shirkadaha isgaarsiinta
[*] Heerka Schufa ee loogu talagalay dadka xorta ah
[*] Heerka Schufa ee ganacsatada yaryar
Kuwaas oo kala horreeyaan waa ku xiga si ay qiimo score ah (tiradaasi Tani waa tan 2008 dhexeeya 0 iyo 9999) waa "heerka darajada" a (AF, halkaas oo waa ugu fiican) oo ah "itimaalka waafaqsan", oo la mid ah xudunta aasaasiga ah ee 0% - 00%.
Laanta shahaadooyinka ayaa maalin walba la cusbooneysiiyaa, marka loo eego asaasiga. Fahmitaanka dhibcahan waa in si gooni ah loo codsado.
Xakamaynta xogta iyo naqshadaynta natiijada
Inkasta oo xogta shakhsi ahaaneed, sida magaca ama taariikhda dhalashada, ayaa sidoo kale lagu kaydiyaa, xogta soo socota ayaa loo adeegsadaa:
[liiska] [*] dhibaatooyinka lacag bixinta ee hore
[*] Terms Credit
[*] Hawl Credit
[*] Taariikhda daynta dheer
Sida laga soo xigtay SCHUFA, macluumaadka geoscoring waxaa kaliya loo isticmaalaa xaalado dhif ah, tusaale ahaan dhibcaha qof ayaa laga xisaabiyaa xogta dadka ku nool aaggaas. Suurtagalnimada waxaa loo isticmaalaa oo kaliya haddii aysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan qof samayn kara xisaabinta dhibcaha suurtogalka ah.
Macluumaadka laga helo warbaahinta bulshada ma isticmaalaan SCHUFA.
Marka lagu daro bixinta qaan-sheegashada, "fududeyn" waxaa lagu talinayaa in la hagaajiyo dhibcaha. Tani waxay ka dhigan tahay isbeddelada isbeddelka hoyga iyo xisaabaha, laakiin sidoo kale haysashada kaararka deynta badankooda ama wixii la mid ah, waxay saameyn xun ku yeelanaysaa dhibcaha shakhsi ahaaneed.
Waa in la xoojiyaa in dhibcaha si joogto ah loo bixiyo ee dhibcaha ay ka fiican tahay marnaba aysan sheegin deyn.
Caydha ugu caansan ee SCHUFA waa dhaleeceyn la'aan la'aanta. Xilliga codsiyada ee muujinta qaabkeeda iyada oo lagu xisaabinayo dhibcaha, waxay soo saartay sirta ganacsiga. Ugu dambeyntii, SCHUFA waxay ahayd waqtigan xaadirka ah ee 28. Janaayo 2014 oo ka socda BGH midig.
Doodda ugu weyni waxay tahay in marka la eego shaacinta saxda ah ee qaababka, macaamiishu waxay isku dayi karaan dhibcooyinkooda, taas oo macnaheedu yahay in qiimaha aan macno lahayn.
Waxaa kaliya oo la ogsoon yahay in qaabka isbeddelka dhaqaale (gaaban: habka logitet) loo isticmaalo go'aamada dhibcaha.
Maqaalka horeganacsiga tafaariiqda
Maqaalka xigtasi Trust